Vaovao - PROMOSY! Ny caliper mavesatra mavesatra indrindra amin'ny DASQUA®
PROMOSIANA! Ny caliper mavesatra mavesatra indrindra amin'ny DASQUA®
Ny calipers dia iray amin'ireo fitaovana mahazatra indrindra ampiasain'ny mekanista handrefesana ny elanelana mahitsy eo anelanelan'ny teboka roa sy ny savaivon'ny zavatra boribory na ny lavaka .. DASQUA dia manana kalifera marobe. Ny Heavy-Duty Caliper no serie mahomby indrindra.
Ny kaliperintsika mavesatra dia tsy ny kalitaon'ny indostrialy azo antoka sy marin-toetra ihany, fa ny mifaninana amin'ny vidiny ihany koa. Miaraka amin'ny fahamendrehana eo amin'ny tsena, milamina kokoa ny kalitaontsika, ary manodidina ny 20% ny vidintsika.
Rehefa tonga ny vanim-potoana fivarotana, dia mampiroborobo maodely roa ho an'ny kaliperin-tsolosa mavesatra toy izao izahay:
1.DASQUA 500mm / 20 santimetatra manamafy fitaovana fandrefesana vy Monoblock Vernier Caliper miaraka am-bava Nib Style
Anaran'ny vokatra: 500mm Heavy-Duty Monoblock Vernier Caliper
Item isa: 1310-0005
Faritra fandrefesana: 0 ~ 500mm / 0 ~ 20 ''
Nahazo diplaoma: 0.02mm / 0.001 ''
Fahamarinana: 0.05mm / 1/128 ''
• Miaraka amin'ny fanitsiana tsara, fandrefesana raikitra, mora ampiasaina;
• Ny valanoranon'ny tany mihamafy miaraka amin'ny tarehy mandrefesina milanja, mateza kokoa;
• Famaranana chrome satin, vy tsy voahidy mandritra ny androm-piainana lava kokoa;
• Tsipika sy tarehimarika miavaka vita amin'ny chrome satin, mora vakiana ny refy;
• Fampiasana roa handrefesana ny savaivony ivelany, ny savaivony anatiny
2.DASQUA 500mm / 20 santimetatra IP54 Kaliperin'ny Digital Digital Heavy Heavy
Anaran'ny vokatra: Caliper nomerika mavesatra 500mm
Item isa: 2220-8110
Nahazoana diplaoma: 0.01mm / 0,0005 ''
• Miaraka amin'ny endriny matanjaka sy habe lehibe ho an'ny fitoniana avo
• vita amin'ny vy matevina
• Vita mafy mifanaraka amin'ny DIN862
• Miaraka amin'ny fanitsiana tsara
• Miaraka amin'ny fiasan'ny Data-Output sy Metric-Inch-Fraction
Fa maninona no mpanao kalitao mavesatra an'ny DASQUA:
1.Niorina tsara mifanaraka amin'ny kalitao mavesatra;
Ny ankamaroan'ny kaliberista mavesatra be eny an-tsena dia manana sakany 17mm, fa ny sakan'ny kaliperina 300mm lehibe dia vita amin'ny 20mm, 500mm ka hatramin'ny 24mm, 1000mm ka hatramin'ny 30mm;
2. Ny fahamendrehan'ny kaliperika lehibe dia 20% ambony noho ny calipers mahazatra eny an-tsena,
Ny mari-pahaizana 300mm caliper lehibe dia vita amin'ny 0,04mm, 500mm ka hatramin'ny 0.05mm, 1 metatra ka hatramin'ny 0,06mm, raha mifehy tsara kosa ny parallivals ny claws ambany mifanaraka amin'ny fenitra Alemanina DIN862. ny parallelism-n'ny caliper 300mm lehibe dia voafehina latsaky ny 0,005mm;
3.Ny fahatsapana ny fihetsiketsehana malefaka sy ny sanda fandrefesana marina
Miaraka amin'ny fikosoham-bary tsara sy fifehezana henjana ny parallelism of the beam, ny mari-pahaizana 300mm caliper's balle parallel degree dia natao hatramin'ny 0.015mm, caliber 1000mm natao latsaky ny 0.03mm;
4.Ny androm-piainana lava kokoa
Miaraka amin'ny famonoana banga amin'ny ankapobeny, vy tsy misy fangarony avo lenta, ny hamafin'ny ankapobeny dia fehezin'ny 52.5HRC;
5.Protection Degree: IP54, efijery fampisehoana lehibe ho an'ny famakiana mora. Ny haben'ny isa aseho eo amin'ny efijery dia manakaiky ny 13mm;
6.Ny claw arc ambany, miaraka amina fiasa efa voatendry, dia afaka refesina amin'ny haben'ny lavaka anatiny sy ny savaivony ivelany.